Eyona mveliso ye-EVA yePuzzle yeMat kunye noMvelisi | Yilibao
Ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo: imveliso yamkela inkqubo yokucinezela ifilimu ye-EVA, ukuprinta okusingqongileyo, okunempilo nokungabinetyhefu.
1. Ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo: imveliso yamkela inkqubo yokucinezela ifilimu ye-EVA, ukuprinta okusingqongileyo, okunempilo nokungabinetyhefu
2. Umphezulu we-anti-skid, okhuselekileyo kunye non-skid: indawo elungelelaniswe ngokuchanekileyo ye-anti-skid, iinyawo azishukumi, ukuthinta okuthambileyo kufutshane nolusu, ukuphucula ukungqubana, vumela iintsana zidlale kwaye zikhase ngokukhuselekileyo.
3. Imibala eqaqambileyo kunye noyilo oluninzi: ukusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zoyilo, ukufana kosana ngakumbi kwaye kukunika indawo yokukhetha.
4.Ukuqina kokuyila: iintlobo ezahlukeneyo zetyeysi ziyafumaneka.
5. Kulula ukuyicoca: ifuna ukosulwa kuphela ngelaphu elomileyo lokucoca uthuli.
Ikhomishini yethu kufuneka ibe kukubonelela abathengi kunye nabathengi ngemigangatho ephezulu esemgangathweni kunye neemveliso zedijithali eziphathwayo ezinoburharha kwiivenkile zefektri zaseTshayina eziThengisayo eziThengisayo. Imeko ephumeleleyo kubathengi bethu. Samkela ngokufudumeleyo abathengi abasuka macala onke okusingqongileyo abaza ngentla kotyelelo kunye nokuseka unxibelelwano oluhlala ixesha elide.
Khumbula ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya kwaye siya kukunika uluhlu lwamaxabiso okhuphiswano emva koko.
Siya kubonelela ngenkonzo yobungcali, impendulo ekhawulezileyo, ukuhanjiswa kwangexesha, Obusemagqabini ubunjani kunye nexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu. Ukwaneliseka kunye nekhredithi elungileyo kuye wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi. Sigxile kuzo zonke iinkcukacha zokwenza iodolo kubathengi de bafumane iimveliso ezikhuselekileyo nezisandi ngenkonzo elungileyo yokuhamba kunye neendleko zoqoqosho. Kuxhomekeke koku, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe ase-Afrika, eMid-Mpuma nase Mpuma mpuma Asia. Ukubambelela kwifilosofi yeshishini 'yomthengi kuqala, ukwenza phambili', siyabamkela ngokunyanisekileyo abathengi abavela ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba basebenzisane nathi.
Egqithileyo Isilayidi esikhulu
Okulandelayo: Isilayidi esincinci